Banyere Anyị - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Yutù Wheel Hongyuan
Gbanyụọ n'okporo ụzọ ụkwụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe niile
E hiwere Hongyuan Wheel Group (HYWG) na 1996 ya na onye bu ya ụzọ dịka Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). HYWG bụ ọkachamara mepụtara rim nchara na rim zuru oke maka ụdị ọrụ niile na-apụ apụ, dị ka akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ, igwe ndị na-egwuputa ihe, forklifts, ụgbọ ala mmepụta ihe.
Mgbe afọ 20 na-aga n'ihu na mmepe, HYWG abụrụla onye ndu ụwa na rim steel na rim ahịa zuru oke, ogo ya gosipụtara site na OEM Caterpillar zuru ụwa ọnụ, Volvo, John Deere na XCMG. Taa HYWG nwere ihe karịrị 100 nde akụ USD, ndị ọrụ 1100, ụlọ ọrụ 5 na-arụpụta ihe kpọmkwem maka OTR 3-PC & 5-PC rim, forklift rim, rim ulo oru, na rim steel.
Ike mmepụta kwa afọ erutela 300,000 rim, ngwaahịa ndị ebupụtara na North America, Europe, Africa, Australia na mpaghara ndị ọzọ. HYWG bụ nnukwu OTR rim na-emepụta ihe na China, na-achọkwa ịbụ onye isi 3 OTR rim na-emepụta ụwa.
Na mbụ dị ka obere ngalaba nchara emepụta, HYWG malitere imepụta rim nchara kemgbe mbubreyo nke 1990, na 2010 HYWG ghọrọ onye ndu ahịa na gwongwo rim nchara na OTR rim nchara, ahịa òkè ruru 70% na 90% na China; e zigara ndị na-emepụta rim zuru ụwa ọnụ dị ka Titan na GKN.
Kemgbe 2011, HYWG malitere imepụta OTR rim zuru oke, ọ ghọrọ onye nrụpụta rim maka OEM zuru ụwa ọnụ dị ka Caterpillar, Volvo, John Deere na XCMG. Site na 4 ”ruo 63”, site na 1-PC ruo 3-PC na 5-PC, HYWG nwere ike ịnye ngwaahịa rim zuru oke nke na-ekpuchi akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ, igwe ndị na-egwuputa ihe, ụgbọ ala mmepụta ihe na forklift. Site na rim steel ruo rim zuru ezu, site na obere forklift rim ka ọ bụrụ nke kachasị ukwuu, HYWG bụ Off The Road Rim Whole Industry Chain Manufacturing Enterprise.
Anyị nwere ike ịmepụta ụdị OTR dị iche iche gụnyere 1-PC, 3-PC na 5-PC rims. Onu ogugu site na 4 ”rue 63” maka ngwa ihe eji eme ihe, igwe ndi ozo, forklifts, na ugbo ala ndi ulo oru.
Ulo oru N'iile
HYWG na-ewepụta ma rim nchara na rim zuru ezu, anyị na-emepụta ihe niile dị n'ime ụlọ maka ihe niile dị n'okpuru 51 ".
Ngosipụta dị mma
Ejirila ndị ahịa OEM dị ka Caterpillar, Volvo, John Deere na XCMG nwalere ngwaahịa HYWG.
HYWG nwere ahụmịhe bara ụba na imepụta na njikwa njikwa maka ihe, ịgbado ọkụ na eserese. Testlọ nyocha anyị na FEA software dị elu na ụlọ ọrụ.
Ndị isi ahịa anyị
Anyị na-eji klaasị ụwa ịgbado ọkụ igwe na ọkara akpaaka akara usoro iji hụ na elu na ike ịgbado ọkụ àgwà. Anyị webatakwara ihe omimi dị omimi n’etiti ntọala rim, flange na gutter ka ha wee nwee ike ịgbacha agbado ọkụ.
Anyị e-mkpuchi akara awade kasị mma praịm mkpuchi nke izute ọtụtụ puku awa mgbochi ajari ule, na agba na agba anya izute n'elu OEM ọkọlọtọ dị ka CAT, Volvo na John Deere. Anyị nwere ike ịnye ike na mmiri mmiri dịka agba dị elu, enwere karịa agba 100 ka ịhọrọ. Anyị na ụlọ ọrụ nwere ndị na-eweta agba dị elu dị ka PPG na Nippon Paint.
Tekinoloji, mmeputa na ule
HYWG abụwo ụlọ ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ OTR rim gbasara teknụzụ, mmepụta na ule. E nwere ihe karịrị 200 injinịa stof n'etiti ngụkọta 1100 ọrụ aku mmepe, mmepụta na oru nkwado maka ngalaba ígwè, rim ígwè na rim zuru ezu na ngwaahịa.
HYWG bụ isi so na National Kọmitii maka Earthmoving Machinery, e bidoro na-ekere òkè na oruru nke OTR rim na rim ígwè ọkọlọtọ mba. O nwere ihe karịrị 100 mba mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ, na asambodo nke ISO9001, ISO14001, ISO18001 na TS16949.
Ngwongwo FEA a kwadebere (Finite Element Analysis) sọftụwia na - eme ka nyocha ọkwa izizi ga - ekwe omume, nnwale mgbochi nchara, nnwale ule, nyocha esemokwu na ngwa nyocha ihe na - eme HYWG nwere ikike ule na ụlọ ọrụ ahụ.
Hongyuan Wheel Group mepere ụlọ ọrụ ọhụrụ na Jiazuo Henan maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na forklift.
Hongyuan Wheel Group nwetara GTW onye bụ ọkachamara na-arụ ọrụ mgbatị nke mgbago mgbago.
Hongyaun Wheel Group meghere ụlọ ọrụ OTR rim dị elu na Jiaxing Zhejiang.
Hongyuan Wheel Group mepere ụlọ ọrụ OTR mbụ na Anyang Henan.
AnYang Hongyuan ngalaba ígwè ụlọ ọrụ malitere na-emepụta ụgbọala rim ígwè na OTR rim ígwè.
Na afọ 20 na-aga n'ihu mmepe HYWG aghọwo nnukwu OTR rim na-emepụta ihe na China, na afọ 10 sochirinụ HYWG na-achọ ịbụ Top 3 OTR rim emeputa na ụwa. Anyị na-ewu na-a Off The Road rim Dum Industry Chain Manufacturing Enterprise.
Bụrụ onye zuru ụwa ọnụ na-eduga ụzọ.
Mepụta ụkpụrụ maka ndị ahịa, mepụta echiche nke ịbụ ndị ọrụ, were ọrụ maka ọha mmadụ.
Hardrụsi ọrụ ike, iguzosi ike n'ezi ihe na ịkwụwa aka ọtọ, mmeri-mmeri.
Offọdụ n'ime Ndị Ahịa Anyị
Ngosipụta ngosi ngosi
Ekere na 2018 Cologne taya ngosi na Germany.